သငျသညျလစျြလြူရှုသင့်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဂန္ရုပ်ရှင် | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
မင်းကိုယ့်ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့သူလို့ထင်ရင် သင်သိရမည့်ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ကားများရှိသည်။ အကယ်၍ သူတို့သည်သင့်အားအောက်ပါစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်အားမေးပြီး အကယ်၍ သင်က Poker မျက်နှာပေါ်တွင်တင်ထားလျှင်၊
အဲဒီမှာ လွဲချော်ရမည်မဟုတ်အချို့ခေါင်းစဉ်, မဖြစ်မနေတည်းဖြတ်မူ၏။
7 Blade ကို Runner
၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးမအောင်မြင်သောချာလ်တန်ဟတ်တန်ကိုသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကမော်ကွန်းရုပ်ရှင်တန်းတူထူးချွန်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်အချိန်ကုန်သက်သာစေသည့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မျက်မှောက်ခေတ်မှဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်များအနက်တစ်ခု ((၁၉၉၄ တွင်ထုတ်ဝေသည်) ။ နှင့်အတူမလေးစားတဲ့ Quentin Tarantino ကညွှန်ကြားခဲ့သည် ရုပ်ရှင်ရုံ၏သမိုင်းတွင်မူရင်းဇာတ်ညွှန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်တွေထဲကစာရင်းထဲမှာမပါ ၀ င်နိုင်ဘူး၊ တစ်ချားလ်စ် Chaplin ခေါင်းစဉ်။ သူ၏အချိန်မတိုင်မီတွင်အင်္ဂလိပ်သရုပ်ဆောင်နှင့်ဒါရိုက်တာသည် ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင်အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏တိုးတက်မှု၏ဝိရောဓိကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
ချားလ်စ်ချပ်လင်းသည်ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်သည် Buster Keaton ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (ဒီဂန္၏ဒါရိုက်တာ) တစ်လောကလုံးရုပ်ရှင်၌သံသယဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုသမိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆပြီး ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
သင်သိသင့်သည့် Stanley Kubrick ရုပ်ရှင်ကားများစွာရှိသည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၎င်းသည်နယူးယောက်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ၏အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။
လူအတော်များများကဒီတိပ်ခွေအကြောင်းပြောကြပေမယ့်လူတိုင်းမမြင်ကြဘူး။ ၁၉၄၀ မှစ။ ၎င်းသည်ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်များ၏ "ဂန္ထဝင်အရှိဆုံး" ဖြစ်သည်.
Blade ကို Runner
၁၉၈၂ နောက်ပိုင်းတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သောသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်ကားများစွာ၊ ဒီ Ridley Scott ဂန္ထံမှအချို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤအပိုင်းကိုမသိလျှင်ဒုတိယအပိုင်းကိုသင်မတွေ့ရပါ။
နောက်ပိုင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေအများကြီးရှိတဲ့ရုပ်ရှင်. Anabelle သည်ခေတ်မှီသောထိတ်လန့်ဖွယ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် Linda Blair သရုပ်ဆောင်သည့်တိပ်ခွေမှ diabolical အရုပ်တိပ်ခွေများစွာကိုရိုက်ယူခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံရင်းမြစ်များ - အဆိုပါ Pelicultista /
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ယဉျကြေးမှု » သင်သိသင့်တဲ့ဂန္ရုပ်ရှင်